CodeCombat ndeye RPG mhando mutambo ane nyaya huru iri kurwisana pakati peogres. Musiyano nemimwe mitambo ndeyekuti paunenge uchirwa iwe unogona kudzidza uyu wakakosha chirongwa chemutauro. Iyo zvakare ine yevazhinji vhezheni vhezheni vemberi programmers avo vanoda kuzviyera pachavo vachipesana nevamwe vanhu.
Asi ikozvino chaicho uye vese avo vadzidzi vanofarira kudzidza iyi programming mutauro vanozogona tamba mahara. Famba codecombat.com uye tanga kutamba nekugadzira account ...
Ndeipi yemahara software ine yakawanda mitsara yekodhi?